बालकथा | Ratopati
बुद्धिमान लाटोकोसेरो access_timeमंसिर २१, २०७७
एउटा जङ्गलकोे कट्टुसको रूखमा एउटा बूढो लाटोकोसेरो (उल्लु) बस्थ्यो । त्यो लाटोकोसेरोले हरेक दिन उसका वरिपरि हुने विभिन्न घटनाहरुको अवलोकन गर्दथ्यो । हिजो उसले एउटा बूढो मानिसलाई एउटा युवकले गह्रौँ भारी बोक्न सहयोग गरेको देख्यो । आज एउटी युवती...
झुटो बोल्यो कि पोल्यो access_timeकात्तिक १५, २०७७
एउटा गोठालो केटो थियो । ऊ अल्छे थियो । पढ्न मन गर्दैन थियो । उसको बानी व्यहोरा पनि राम्रो थिएन । अरूलाई दुःख दिँदा उसलाई मज्जा लाग्थ्यो । एक दिनको कुरा हो । ऊ गाउँ नजिकैको जङ्गलमा खसीबाख्रा चराइरहेको थियो । जङ्गल नजिकैका खेतबारीमा...
राजा मिदासको कथा : वरदान बन्यो श्राप ! access_timeकात्तिक १५, २०७७
ग्रीस भन्ने देशमा एकजना राजा थिए । उनको नाम थियो– मिदास । उनी अत्यन्तै लोभी थिए । एक दिनको कुरा हो, उनले कुनै राम्रो काम गरेबापत देवता खुसी भए । उनको दरबारमा ग्रीस देवता डाइनसिस प्रकट भए । उनले राजा मिदासलाई मन लाग...
दुई साथी access_timeभदौ ९, २०७७
एकपल्ट दुईजना साथीहरु जङ्गलमा जाँदै थिए, अकस्मात एउटा भालु हामम्फाल्दै आइपुग्यो । एकजना दगुर्दै रुख चढिहाल्यो र त्यहाँ लुकेर बस्यो । अर्को साथीले चाहिँ भाग्न भ्याएन । के गर्ने हो अब ? ऊ त्यही बाटोमा लम्पसार परेर पल्टियो र मरे जस्तो गर्यो । भालु उसको नजिक आयो...
भव्य विवाह भोजमा एउटा मात्रै मान्छे ! access_timeसाउन ३२, २०७७
कुनै छिमेकीको घरमा शुभविवाहको भव्य तयारी थियो । त्यस ठाउँमा निकै मानिसको जमघट हुन थाल्यो । त्यहीबेला एकजना छिमेकीले आफ्नो घरको नोकरलाई बोलाएर भन्यो, ‘त्यहाँ तिमी गएर कतिजना मानिस भेला हुन्छ , त्यसको सही खुबर मलाई गर्नु ।’ नोकर गयो । उसले मान्छे ओ...
‘एक विचित्र गल्ली !’ access_timeजेठ २७, २०७७
चाङ् छ्यूशङ् किशोरले बालबालिकाहरुलाई जुटाएर कथा सुनाएको अर्का दिन जव मानिसहरुले यस गल्लीमा कदम राखे, तिनीहरुले हरेक झ्यालका सीसामा चित्रविचित्रका आकर्षक चित्रहरु अङ्कित देखे । सवै सवै वालसुलभ कल्पनाशील चित्र । हरेक चित्रलाई जोडेर हेर्ने हो भने साह्रै रा...
साहसीको बाटो access_timeफागुन १, २०७६
बुढो सन्न भयो । उसको हाटबाट लाठी छुट्यो र भुइँमा झर्‍यो । ली श्याओच्युनको कपाल मुसार्दै भन्यो, “हरे, कुरा यस्तो पो रहेछ ? तिमीलाई हिर्काएर मैले ठूलो गल्ती गरें । बाबु, तिमीलाई घाउ त लागेन ? मेरो बानी अलि बढी नै झोकी छ । तिमीले आएर यसरी गल्ती स्वीकार गर्ला...
टेलिफोन access_timeमाघ १४, २०७६
चाङ छ्यूशङ विद्यालयबाट घर फर्कदा आज बाबाको कोठामा टेलिफोन जोडेको देखें । टेलिफोनका लागि बाबाले महिनौं अघि फारम भर्नु भएको थियो । आज बिहानै कम्पनीका मानिसहरु आएर लाइन जोडिदिएछन् । बाबा आमा दुबै जना अफिसबाट घर फर्कनु भएको थिएन । घरमा म र टेलिफोन...
बदला लिन कस्सिएको बछेडो ! access_timeमाघ १२, २०७६
सडक किनारको चउरमा एउटी घोडी चरिरहेकी थिई । अलि पर अग्ब्लो पाललो खुट्टाको एउटा बछेडो उफ्रदै दगुर्दै खेल्दै चरिरहेको थियो । सडकमा सडकै चिर्लान् कि जस्ता बडेमानका बस ट्रक एकपछि अर्को बतासिँदै हुइँकिरहेका थिए । पछि पछि भटभटे मोटरसाइकिलहरु त्यत्तिकै बतास्सिद...
मलाई सपना देख्न मनपर्छ access_timeमाघ ६, २०७६
छन तानयेन म सात वर्षको भएँ । म सधैँ बेलुका टिभी. मा समाचार कार्यक्रम हेरेर सुत्न जान्छु । मेरो आफ्नो सानो पलङ छ । हजुरआमाको ठूलो पलङसित जोडिने गरी राखिएको मेरो पलङ झ्यालको नजिकै छ । म जब पलङमा लेट्छु आँखा केही बेरसम्म खुला नै रहन्छन् । हजुरआमाले ठ...
श्याखको लेख access_timeपुस २९, २०७६
चाङ् छङ्सुन कक्षामा पढाउँदा अध्यापक मिखाइको अनुहार सधैंजसो भावशून्य नै रहेको देखिन्थ्यो । “श्याख, तिमीले लेख लेखिसक्यौ त ?” अध्यापक मिखाइले कक्षामा विद्यार्थीमध्येका श्याखसँग सोधे । पहेंलो अनुहारबीच थ्याच्च नाक, नाकमाथि गोलगोल चश्मा, चश्माभित्रबाट...
साहस र सामूहिकताको चमत्कार !’ access_timeमंसिर १, २०७६
दिन ढल्दै थियो । घामको पहेँलिँदै गएको सुन्दर किरण बगैंचाभरि छरिएको थियो । बडो भव्य र मन–मोहक दृश्य थियो बगैंचाको । बगैंचाका बीचको विशाल चउर बालकहरुको खेल मैदान थियो । त्यहाँ खेल्ने बालकहरु प्रायः यति बेलै त्यहाँ जुट्थे । आज के खेल्ने ? आपसको स...